Akụkọ kacha ọhụrụ banyere Federal Audit Services Commission si Nigeria & ụwa | TAA
Code of Conduct Tribunal na-ekpe ikpe na-akwado 16 nke nkwupụta akụ na ...
Home Tags Federal Audit Services Commission
Federal Audit Services Commission
Senate na-akwụ ụgwọ iji mee ka Ụlọ Ọrụ Gọọmentị Audit
Ụgwọ ahụ mgbe ndị isi iwu abụọ ahụ kwadoro ma kwenye na onye isi oche ahụ ga-eguzobe Ụlọ Ọrụ Gọọmentị Audit na ụlọ ọrụ nke Auditor General nke Federation na ndokwa maka ike na ọrụ ndị ọzọ.
Nwanna Nwanna Nwanna Nwanna Naija, bụ eze na-egwupụta egwu nke ụlọ ahụ, Cynthia Nwadiora, nke a maara dị ka Cee-C, kwuru na ọ ga-aga ịhụ onye ndụmọdụ ngwa ngwa mgbe ọ gasịrị njem mgbasa ozi.
Code of Conduct Tribunal na-ekpe ikpe 16 na-eme nchọpụta maka nkwupụta akụ na Bauchi
Usoro Usoro Omume (CCT) nke dị na Bauchi kwetara na ndị 16 ndị ọrụ obodo na ndị ụlọ ọrụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị kwenyere na ha enweghị nkwupụta nke akụ.
Ndị uweojii dọrọ aka ná ntị gbasara ndị Liverpool na-enweghị tiketi maka Njikọ Njikọ ọkara ikpeazụ nke abụọ na Wednesday ka ha ghara ịga Rome.
Nchịkọta iwu nke iwu nwere ogologo oge, checkered akụkọ ihe mere eme. Ikekwe, otu n'ime ihe ndị kasị dị ịrịba ama na Senate na 18 gara aga na-ele nche na Chuba Okadigbo, mgbe Onyeisi President Olusegun Obasanjo gbalịrị iji ezi na ihe ọjọọ gbapụ Okadigbo dị ka onyeisi oche nke Senate.
Official: Kaduna iji kwado ọzụzụ ọzụzụ nke volleyball
Ụlọ ọrụ North West Zonal nke Ụlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ndị Ntorobịa na Egwuregwu na Federal na-ahazi usoro mmụta ọzụzụ ụbọchị anọ na Kaduna ka onyeisi oche nke Volleyball Federation (NVBF) kwadoro, Mr Musa Nimrod.
Kọmitii ndị isi na-emeso ndị ọrịa 5,000 anya na Borno
Kọmitii ndị isi na Northeast Initiative (PCNI) na Monday kwuru na ọ na-enye ọgwụgwọ anya n'efu banyere ndị 5,000 ndị nọpụrụ na Borno.
Nsonaazụ nchọta na ndị nhoputa aka na - enweghị ike - PDP gwara INEC
Ndi otu Democratic Party (PDP) akpọwo na Independent National Electoral Commission (INEC) iji mee ka ọha na eze nweta ihe nchoputa ya na ndi isi ochichi di iche iche, karia Kano na Katsina.
Lagos na-amalite n'usoro mgbasa ozi mpaghara
Lagos State Parks na Gardens Agency (LASPARK) na-ekwu na ọ malitere Community Tree Planting Campaign n'ofe 20 na mpaghara mpaghara na 37 na mpaghara obodo mmepe nke steeti.
Ana m echere ọnwụ nke Generals Babangida, Obasanjo kwa ụbọchị - nwa Gani Fawehinmi
Nwa nke onye na-egbuke egbuke iwu na ndi mmadu na-eme ihe ndi mmadu, Muhammad Muhammed Fawehinmi, na Sunday kwuru na o na-eche onwu onye isi ochichi agha, General Ibrahim Badamosi Babangida, IBB, na onye isi President Olusegun Obasanjo kwa ụbọchị.